Vono olona tany Belo Tsiribihiana Lehilahy iray no voasambotra
Lehilahy iray no voasambotry ny polisim-pirenena avy ao amin’ny CSPD Belo/Tsiribihina noho ny fandraisany anjara tamina vono olona izay nitranga ny alakamisy faha 23 aprily lasa teo ka nahafatesana lehilahy iray.
Tokony ho tamin’ny 01 ora maraina no nitrangan’ny famonoana io lehilahy io, izay marihina fa Chef ZAP ao Belo sur mer, tao amin’ny fokontanin’ny Soatsioky. Manoloana izany tranga izany dia nikaroka ilay nahavanon-doza avy hatrany ny polisy sy ny fokonolona ka lehilahy iray, 30 taona no voasambotra tsy lavitra teo. Mbola nahitana famaky iray teny aminy tamin’ny fotoana nahasamborana azy io. Nogiazana avy hatrany io fitaovana io ary nentina nanaovana fanadihadiana kosa ralehilahy. Nandritra izany dia nilaza izy fa tsy namono ilay lehilahy io fa ny namany izay niaraka taminy tamin’io fotoana io no nahavanona izao vono olona izao, saingy nanampy azy kosa izy tamin’ny fanaovana izany. Mbola karohina ankehitriny io namany io. Natolotra ny fampanoavana ny talata lasa teo ny lehilahy ary nidoboka vonjimaika any am-ponja.